Dzokera paSocial Media Investment | Martech Zone
Dzokera paSocial Media Investment
Mugovera, January 20, 2018 Svondo, Ndira 21, 2018 Douglas Karr
Zvemagariro venhau vaive nevimbiso inoshamisa senge svikiro rekusimudzira hukama pakati pemutengi kana mutengi uye bhizinesi rinopa zvigadzirwa kana sevhisi. Makambani mazhinji akasvetuka pakarepo mubhodhi asi iyo ROI yanga isinganzwisisike sezvo zvaisawanzo guma nekukurumidza kana kunanga mari.
Usati waisa yako yemagariro chirongwa kuti ubudirire, zvakakosha kuti unzwisise izvo zviitiko zviri zvechokwadi kutyaira ROI munharaunda. Zviri zvemukati kushambadzira, ruzivo rwemagariro, kana kukurudzira uye kuchengetedza matanho senge yemagariro vatengi. Salesforce yakabatana neAltimeter ku shambadza chidzidzo chakanangana neiyi nhaurwa chaiyo, iyo ROI yemagariro enhau manejimendi.
Zvakawanikwa pakutsvagurudza zvinoratidzira kuti pane kudzoka kwekudyara kwehukama enhau, asi zvakasimbiswa kuburikidza nekugona pamwe nekukura. Kubudirira kunodiwa nekuti kumisikidza gwara rezvenhau rinoda kusangana uye otomatiki kuronga, kubata, kuongorora, uye kupindura zviitiko zvezvemagariro.
Kukura kunodiwa kuti uve nechokwadi chekuti pane maitiro akachengetedzwa munzvimbo yekuwedzera kubatanidzwa nevezvenhau vezvenhau zvinotevera uye nekuyera zvayakanakira. Muchokwadi, iyo ROI yemagariro midhiya, sekuyerwa nekambani net inosimudzira mamaki, yakapetwa kaviri nekukura.
Dhawunirodha Chirevo Chizere
Tarisa uone yavo infographic, Iyo ROI yeSocial Media Management, kuti unzwisise kuti ndeapi masocial matani anotyaira yemagariro ROI uye ndeapi mashandiro aunoda iwe pasocial chikuva kuti ubudirire.
Tags: dzoka pakudyaradzoka pasocial mediadzoka pasocial media kudyara
Constellation: Benchmark Yako Yemagariro Kushambadzira Performance
Jan 26, 2012 pa 10: 30 AM
Maitiro enhau enhau uye zvinangwa zvakasiyana pabhizinesi rega rega. Nepo mamwe mabhizinesi achigona kuona kuti vezvenhau inzvimbo huru yekuitira makwikwi kana kutumira zvidzikiso, iyo inogona kunge isiri iyo nzira yekuita kune ese mabhizinesi. Izvo zvakakosha kuti urambe wakatendeka kune chako chiziviso chitupa.
Ndira 26, 2012 na4: 42 PM
Totally agree, @nickstamoulis: disqus! Uye ini ndinofunga dzimwe nguva isu tinotarisa pane ROI kururamisa peni yega yega uye isu hatidi. Dzimwe nguva zvakangonaka chete kuti uwane zita rako kunze uko pasina kutarisira kuti madhora ari kuzonaya pasi!
Jan 29, 2012 pa 5: 53 AM
Wow, idzi dhata dzinobatsira uye dzinonakidza. Ndotenda zvikuru!
Zvemagariro midhiya zvechokwadi ndeimwe yeakakurumbira, anoshandiswa zvakanyanya kushambadzira midhiya mazuva ano.